Maamule Ban Oo Xukun Ku Mutaystay Dad Sabool Ah Oo Caawimmo U Fidiyey | Berberatoday.com
Maamule Ban Oo Xukun Ku Mutaystay Dad Sabool Ah Oo Caawimmo U Fidiyey
October 7, 2018 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Gilberto Baschiera, oo ah maamule bank magaalo yar oo ku taalla dalka Taliyaaniga, ayaa waxa uu hal-milyan oo euro ka xaday acconnada dadka taarjiriinta ah, si uu ugu taageero dad faqiir ah oo u baahan.
Acconnadan, ayuu lacago kala baxayay muddo muddo 7 sanno ah, isagoo lacagtaa u xawilayay acconnada dadka faqiirka ah, isagoo ka garab-siinaya si ay u heleen daymo, hal Euro oo qudha, naftiisa uma aanuu reebi jirin.
Arrintan ayaa la ogaaday kadib markii macaamiisha qaar ee uu dayn siiyaya ay iska bixin kari waayeen lacagihii la daymiyay. Baschiera markaa dhibaato ayay lugaha u geliyeen. si uu lacagtaa u guddo, waxa uu ku waayay gurigiisa iyo shaqadiisa, maxkamaddu waxay ku xukuntay laba sanno oo xadhig ah iyadoo loo ogolaaday in damiin lagu sii dayn karo.